Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. किन एक्सनमा असफल भइन् नम्रता ? – Emountain TV
काठमाडौं, २८ भदौ । गएको जेठमा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ पछि कुनै नेपाली फिल्मले नाफाको व्यापार गर्न सकेका छैनन् । न त दर्शक नै रिझाउन सफल भएका छन् । हरेक हप्तामा हलमा नयाँ फिल्म टुटेका छैनन् तर थला परेको नेपाली फिल्मको व्यापार जस्ताको त्यस्तै छ । उकासिने छाँटकाँट देखिएको छैन । आश गरिएका फिल्मले समेत निराशाजनक व्यापार गर्दा फिल्मकर्मीहरु चिन्तित देखिन थालेका छन् ।
गएको साउन अन्तिममा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’ ले सुस्ताएको फिल्मको व्यापार उठाउने ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । तर, फिल्मले सुरुवाती दिनदेखि नै दर्शकको खडेरी भोग्नु पर्‍यो । यो फिल्मपछि सबैको आशाको त्यान्द्रो अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ स्टारर फिल्म ‘जाइरा’ माथि अडिएको थियो । पहिलो पटक नम्रता एक्सन अवतरमा प्रस्तुत भएका कारण फिल्मलाई दर्शक अभाव नहुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, यो फिल्मले पनि निराशाजनक व्यापार गर्‍यो । ‘जाइरा’ मा नम्रता मार्शल आर्ट खेलाडीको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी थिइन् । चरित्रलाई आत्मसात् गर्न उनले ८ महिना लामो मार्शल आर्टको तालिम लिइन् । वर्षौदेखि महँगो स्याम्पूले स्याहारेको सिल्की कपाल मुण्डन गरिन् । निर्मातालाई आर्थिक संकट परेपछि उनी आफैं निर्मात्री बनिन् । तर, दुर्भाग्य ! उनको मेहनतले रंग ल्याएन । किनकि, फिल्म नै कमजोर बनेको थियो ।
यद्यपि, फिल्ममा उनले गरेको मेहनत र अभिनयको मुक्तकण्ठले प्रशंसा भएको थियो । मार्शल आर्ट खेलाडीको रुपमा आफूलाई ढाल्न उनले गरेको मेहनत पर्दामा स्पष्ट देखिएको थियो । तर, फिल्म असफल भएपछि उनको गरेको मेहनत छायाँमा पर्‍यो । गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘प्रसाद’ बाट वाहवाही बटुलेकी उनलाई ‘जाइरा’ को असफलताले ठूलो धक्का दिएको छ ।
नम्रता लभर गर्लकोे भूमिकामा सर्वाधिक रुचाइएकी अभिनेत्री हुन् । अभिनेता आर्यन सिग्देलसँग उनको जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाउने गरेका छन् । पर्दामा सोझी र शान्त स्वभावकी प्रेमिकाको भूमिकामा निकै फिट मानिने उनलाई दर्शकले लभर गर्लकै भूमिकामा हेर्न रुचाउँछन् । तर, ‘जाइरा’ मा एक्सन अवतारमा प्रस्तुत हुँदा उनले निराशा भोग्नुपर्‍यो । अब दर्शकको इच्छा अनुसार नै काम गर्ने कि नम्रताजी ! फिल्मिखाबरबाट